Mary သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Worldwide Church of God Switzerland ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-04 > မာရီယာကပိုကောင်းတာကိုရွေးခဲ့တယ်
မာရိ၊ မာသနှင့်လာဇရုတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့မှသံလွင်တောင်၏အရှေ့တောင်ဘက်သုံးကီလိုမီတာခန့်တွင်ဗေသနိရွာတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည်မာရီယာနှင့်မာတာတို့ညီအစ်မနှစ် ဦး ၏အိမ်သို့လာခဲ့သည်။
ဒီနေ့ငါ့အိမ်ကိုယေရှုလာနေတာတွေ့ရင်ငါဘာပေးရမလဲ။ မြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်သော၊ မြင်သာထင်သာနှင့်မြင်သာထင်သာရှိသည်။
“ဒါပေမယ့် သူတို့ပြောင်းလာတဲ့အခါ ရွာတစ်ရွာကို ရောက်လာတယ်။ မာတာအမည်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိ၏” (လုကာ 10,38) Martha သည် Maria ၏အစ်မဖြစ်နိုင်သည် “မာရီယာအမည်ရှိသော ညီမတစ်ယောက်ရှိ၍၊ သခင်ဘုရား၏ခြေတော်ရင်း၌ ထိုင်၍ စကားတော်ကို နားထောင်၏။” (လု 10,39).
မာရိသည် သခင်ယေရှုကို အလွန်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ယေရှု၏ရှေ့တွင် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကာ အားရပါးရ မျှော်လင့်ကာ သူ့ကိုကြည့်ရန် နှစ်ကြိမ်မျှ မစဉ်းစားခဲ့ပေ။ သူမ နှုတ်ဖျားမှ စကားလုံးတိုင်းကို ဖတ်သည်။ သူ့အဖေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောတဲ့အခါ သူ့မျက်လုံးတွေက မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မထနိုင်။ သူ့အကြည့်တွေက သူ့လက်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို လိုက်နေပါတယ်။ သူ့စကားတွေ၊ သွန်သင်ချက်တွေနဲ့ ရှင်းပြချက်တွေကို သူမ လုံလောက်အောင် မရဘူး။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ခမည်းတော်၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။ “သူ (ယေရှု) သည် မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးမတိုင်မီတွင် သားဦးဖြစ်သည်” (ကောလောသဲ၊ 1,15) မာရီယာအတွက်ကတော့ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ရင် လူကိုယ်တိုင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မြင်နေရတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ သူမသည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် ကောင်းကင်ဘုံကို ခံစားခဲ့ရသည်။ မာရိကို တွေ့ကြုံခံစားခွင့်ရသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါ ကတိတော်၏ ပြည့်စုံမှုဖြစ်သည်။ "ဟုတ်တယ်၊ သူက လူတွေကို ချစ်တယ်။ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည် သင်၏လက်၌ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် သင့်ခြေရင်း၌ ထိုင်၍ သင်၏စကားများကို သင်ယူကြလိမ့်မည်” (5. မောရှေ ၁3,3).
ဤစုဝေးခြင်းကို ဣသရေလလူတို့အား ဘုရားသခင် ကတိပြုတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ခြေရင်း၌ထိုင်ကာ ယေရှု၏စကားများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်စုပ်ယူကာ ကိုယ်တော်၏စကားကိုယုံကြည်ရန်လည်း ခွင့်ပြုထားသည်။ လုကာ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အံ့အားသင့်လုနီးပါးဖြစ်လိမ့်မည်– «တစ်ဖက်တွင် မာတာသည် သူ၏ဧည့်သည်များ၏ကောင်းကျိုးကို စောင့်ရှောက်ရန် အလုပ်များစွာလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမသည် သခင်ယေရှုရှေ့တွင် ရပ်လိုက်ပြီး “သခင်၊ ငါ့နှမကို အလုပ်အားလုံးကို တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာ မှန်တယ်ထင်လား။ ငါ့ကိုကူညီဖို့ပြောပါ!" (လု 10,40 NGÜ)။
မာတာ၏စကားများနှင့် သူတို့၏ခံစားချက်များကြောင့် ယေရှုနှင့် မာရိ၏ရင်းနှီးမှုသည် ပြိုပျက်သွားခဲ့သည်။ အမှန်တရားက သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ကျော်တက်သွားတယ်။ Martha ပြောတာ မှန်ပါတယ်၊ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သို့သော် မာတာ၏မေးခွန်းကို ယေရှု မည်သို့တုံ့ပြန်တော်မူသနည်း– “မာတာ၊ မာတာ၊ မင်းမှာ စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ လိုအပ်တယ်။ မာရိသည် ကောင်းမွန်သောအပိုင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မယူသင့်ဘူး” (လု 10,41စာ-၄၂)။ ယေရှုသည် မာသကို မာရိကဲ့သို့ ချစ်စဖွယ်ကြည့်ရှုသည်။ သူအရမ်းစိုးရိမ်ပြီး အရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
ဤနေ့၌မာရိလုပ်သောအရာသည်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်၌ယေရှုကိုအလွန်နှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၌ယေရှုအလွန်ဆာလောင်လျှင်၊ သူသည်မောပန်းခြင်း၊ ရေငတ်လျှင် Marta ၏အစားအစာသည်ပထမလိုအပ်လိမ့်မည်။ မာရီယာသည်သူ၏ခြေရင်း၌ထိုင်ပြီးသူ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုမမှတ်မိနိုင်၊ သူ့ဖိနှိပ်ထားသောသမ်းမှုကိုသတိမထားမိဘဲမေးခွန်းများစွာဖြင့်သူ့ကို ၀ င်တိုက်လိုက်သည်၊ ဒါကသနားစရာကောင်းပြီးထိရောက်မှုရှိရဲ့လား။ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ အချစ်သည်သူတစ်ပါး၏အောင်မြင်မှုကိုအလေးအနက်မထားပေမဲ့အချစ်ဆုံးရဲ့နှလုံးသား၊ သူ့အာရုံ၊ သူ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုကြည့်ချင်၊ ခံစားရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အသင်းတော်၊ သခင်ယေရှု၏အသင်းတော်သည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်၊ ဦးစားပေးသည်ဟူသော ဤပုံပြင်မှ အမြဲဖတ်ဖူးသည်။ ဤဦးစားပေးသည် ယေရှု၏ခြေရင်း၌ထိုင်ခြင်း၊ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို လက်ခံခြင်းနှင့်ကြားခြင်းတွင် ပုံဆောင်သဘောအရဖြစ်သည်။ နားမထောင်ဖူးသူများသည် ကောင်းစွာမထမ်းဆောင်နိုင် သို့မဟုတ် ပြိုလဲသည်အထိ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့် အမှုဆောင်ခြင်းထက် နားထောင်ခြင်းသည် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ အလှူမပြုမီ ကြားနာခြင်း နှင့် ပေးကမ်းခြင်း မပြုမီ သိခြင်း ခံယူခြင်း ဖြစ်၏။ "ဒါပေမယ့် မင်းမယုံကြည်တဲ့သူကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။ မကြားဘူးသော ကိုယ်တော်ကို မည်သို့ယုံကြည်ရမည်နည်း။ တရားမဟောဘဲ ဘယ်လိုကြားရမှာလဲ” (ရောမ 10,14)
အမျိုးသမီးများနှင့်ယေရှုဆက်ဆံပုံသည်ဂျူးအသိုင်းအ ၀ န်းအတွက်မခံမရပ်နိုင်၊ ဒါပေမယ့်ယေရှုကအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေနဲ့ယှဉ်ရင်အကြွင်းမဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးပေးတယ်။ ယေရှုသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်မလိုမုန်းထားမှုမရှိပေ။ သခင်ယေရှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးများသည်နားလည်ခံစား၊ အလေးအနက်ထားပြီးတန်ဖိုးထားသည်။
မာရိသည်၎င်းသည်သခင်ယေရှုနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်မူတည်ကြောင်းသဘောပေါက်သည်။ လူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းမရှိတာနဲ့ကွဲပြားတဲ့တန်ဖိုးတွေမရှိဘူးဆိုတာသူသိတယ်။ မာရိသည်ယေရှုသည်သူ့အားအလုံးစုံဂရုပြုကြောင်းကိုသိရှိခဲ့သည်။ သူမဟာယေရှုရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူမှီခိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသူ့ကိုဂရုတစိုက်နဲ့ယေရှုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူမဟာဘုရားသခင့်ပဋိညာဉ်ပညတ်တော်ဟောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ဘဲယေရှုရဲ့စကားနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မာရိကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်။
လုကာရှိ မာရိနှင့် မာသတို့၏ ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်လိုပါက ယောဟန်၏မှတ်တမ်းကိုလည်း ကြည့်ရှုသင့်သည်။ ဒါဟာ အလွန်ခြားနားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ လာဇရုသည် သင်္ချိုင်းတွင်း၌ ရက်အတော်ကြာ လဲလျောင်းနေသဖြင့်၊ မာတာသည် နံစော်နေပြီဟု ယေရှုအား ပြောလေ၏။ ထို့နောက် ယေရှု၏အံ့ဖွယ်အမှုဖြင့် သူတို့၏ညီလာဇရုကို သေခြင်းမှ အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ စားပွဲမှာ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ထိုင်ခွင့်ရတဲ့ မာရိ၊ မာတာနဲ့ လာဇရုအတွက် ဝမ်းသာစရာပါ။ တော်တော်သာယာတဲ့နေ့ပါပဲ။ “ပသခါပွဲမစမီ ခြောက်ရက်အလိုတွင်၊ ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော လာဇရုရှိရာ ဗေသနိရွာသို့ ကြွတော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ ကျွေးမွေးပြုစု၍၊ လာဇရုသည် သူနှင့်အတူ စားပွဲ၌ထိုင်သူထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်” (ယောဟန် ၁2,1-2) ။
ငါတို့ကယေရှုအတွက်ဘယ်နေ့လဲလို့တွေးမိလား။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်အဖမ်းမခံရမီခြောက်ရက်အလိုတွင်၎င်းအားနှိပ်စက်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်နှက်လိမ့်မည်ဟုသေချာသည်။ သူ့ပုံစံကပုံမှန်ထက်ပိုထူးခြားနေတယ်ဆိုတာငါသတိထားမိလား။ သူ့မျက်နှာပေါ်ရှိအမူအရာကသူတင်းမာနေတာကိုငါသတိပြုမိနိုင်မလား၊ သူ့ဝိညာဉ်ဝမ်းနည်းနေလားငါသတိထားမိလား။
ယနေ့ ထိုနေ့၌ ယေရှုသည် လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုရက်သတ္တပတ်တွင် သူသည် စိန်ခေါ်ပြီး တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ ဘယ်သူ သတိထားမိလဲ။ တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသောတပည့်တို့၊ မဟုတ်ဘူး! မာရီယာ သိပြီး ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ အရာအားလုံးက မတူဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ ငါ့သခင်ကို ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူးဆိုတာ မာရီယာအတွက် ရှင်းပါတယ်။ “ထိုအခါ မာရိသည် စင်ကြယ်၍ အဖိုးတန်သော ဘိသိက်ဆီတစ်ပေါင်ကိုယူ၍ ယေရှု၏ခြေတော်ကို လိမ်းပြီးလျှင် သူ၏ဆံပင်နှင့် ခြေကိုခြောက်စေ၏။ ဆီရနံ့နှင့် ပြည့်နေ၏။” (ယော၊ ၁2,3).
မာရိသည်ယခုအချိန်တွင်ယေရှုမည်သို့ခံစားနေရသည်ကိုနားလည်သောတစ် ဦး တည်းသောသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကိုမြင်ရန်နှင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုတည်းရှိသည်ဟုလုကာဘာကြောင့်ယခုရေးသနည်း။ မာရိသည်ယေရှုသည်မြေကြီးဘဏ္allာအားလုံးထက် ပို၍ အဖိုးတန်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘဏ္Evenာကိုပင်ယေရှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးမရှိပါ။ ဒါကြောင့်သူမဟာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရဖို့ယေရှုရဲ့ခြေပေါ်ကိုသွန်းလောင်းခဲ့တယ်။
“နောက်မှ သစ္စာဖောက်သော တပည့်တော်တစ်ဦးဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်က၊ ဤဆီငွေသုံးရာနှင့် ဆင်းရဲသားတို့အား ပေးသောငွေကို အဘယ်ကြောင့် မရောင်းရသနည်း။ လက်ရုံးကို ဂရုပြု၍ သူခိုးဟု မပြောဘဲ၊ ပိုက်ဆံအိတ်ရှိ၍ ပေးသော ဥစ္စာကို ယူလေ၏။” (ယော၊ ၁2,4-6) ။
ငွေ 300 (denarius) သည် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခြေခံလစာဖြစ်သည်။ မာရိက သူ့မှာရှိသမျှ အဖိုးတန် ဘိသိက်ဆီဝယ်ပြီး ပုလင်းကိုဖွင့်ပြီး အဖိုးတန် ဆီဖိုးကို ယေရှုရဲ့ခြေရင်းပေါ် လောင်းလိုက်တယ်။ တပည့်တွေက ဘာများ ဖြုန်းတီးကြတာလဲ။
အချစ်သည် ဖြုန်းတီးသည်။ မဟုတ်ရင် အချစ်မဟုတ်ဘူး။ တွက်ချက်သောအချစ်၊ တန်ဖိုးရှိသည်ဖြစ်စေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသည်ဖြစ်စေ အံ့သြဖွယ်တွက်ချက်သောအချစ်သည် စစ်မှန်သောအချစ်မဟုတ်ပါ။ မာရိသည် ယေရှုအား လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အပ်နှံခဲ့သည်။ “ထိုအခါ ယေရှုက၊ သူတို့ကို ထားလိုက်ပါ။ ငါ့ဈာပနနေ့နှင့် သက်ဆိုင်သင့်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသောသူတို့သည် သင်၌ အမြဲရှိ၍၊ သို့​ရာ​တွင်​သင်​၌​အ​ကျွန်ုပ်​ကို​အ​စဉ်​မ​ရှိ​ပါ” (ယော၊ ၁2,7-8) ။
ယေရှုသည် မာရိ၏နောက်၌ မိမိကိုယ်ကို လုံးလုံးထားတော်မူ၏။ သူမ၏ ကြည်ညိုလေးစားမှုကို လက်ခံခဲ့သည်။ မာရိသည် သင်္ဂြိုဟ်မည့်နေ့တွင် ဘိသိက်ခံရန် မမျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုခြင်းမှာ အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်း ယေရှုလည်း ပေးခဲ့သည်။ မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းပါ အပြိုင်ကျမ်းပိုဒ်တွင်၊ ယေရှုက “ဤဆီသွန်းလောင်းရာတွင် ငါ့ကိုယ်ပေါ်၌ မြှုပ်နှံရန် ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ ပြုတော်မူ၏။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ဤဧဝံဂေလိတရားကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တို့၌ ဟောတော်မူသည်အတိုင်း၊ သူပြုသောအမှုကို အောက်မေ့ခြင်းငှါ မိန့်တော်မူလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂။6,12-13) ။
ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘိသိက်ခံ (မေရှိယ) ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို ဘိသိက်ပေးမည့် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဘုရားသခင့်အစီအစဥ်တွင် မာရိသည် သမာသမတ်ကျစွာ အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ယင်းကတစ်ဆင့် ယေရှုသည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထိုက်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။
အိမ်တော်သည်မာရိ၏အကြွင်းမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ရနံ့နှင့်ပြည့်နေသည်။ မာရိသည်သခင်ယေရှုဘက်လှည့်သကဲ့သို့၊ လူတစ် ဦး သည်သူ၏မောက်မာမှု၏ချွေးနံ့ကိုသူမယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါကမည်မျှမွှေးကြိုင်သနည်း။
ဤအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ခြောက်ရက်အကြာတွင်ယေရှုသည်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ သုံးရက်အကြာတွင်သူသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည် - ယေရှုသည်အသက်ရှင်သည်။
သခင်ယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ သူသည် ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့် ချုပ်တည်းခြင်းတို့ဖြင့် သင့်အသက်တာကို ဖြတ်သန်းပါ။ သူ့အားဖြင့် သင်သည် အသစ်သောဝိညာဉ်ရေးအသက်တာ - ထာဝရအသက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သင်သည် သူနှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးရှိပြီး ပြီးပြည့်စုံပြီး အကန့်အသတ်မရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် သူနှင့်အတူ နေထိုင်ပါ။ “ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင် သိုမှီးထားသော နားမလည်နိုင်သော အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​နှင့်​စပ်​ဆိုင်​သော​သင်​တို့​သည် ဤ​နက်​နဲ​မှု​ကို​နား​လည်​နိုင်​ကြ​၏။ ရေးထားသည်မှာ ခရစ်တော်သည် သင့်အထဲ၌ အသက်ရှင်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား သူ၏ဘုန်းအသရေ၌ ဝေမျှပေးမည်ဟူသော ခိုင်မာသောမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။” (ကောလောသဲ၊ 1,27 HFA)။
မင်းကယေရှုရဲ့ခြေရင်းမှာဘယ်တုန်းကထိုင်ပြီးသူ့ကိုမေးတာလဲ၊ ဒီနေ့ငါ့ကိုဘာလုပ်စေချင်လဲ။ မင်းဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်လဲ။ သခင်ယေရှု၊ အထူးသဖြင့်ယနေ့၊ ယနေ့သင့်အားအဘယ်အရာစိုးရိမ်သနည်း။ သင်မာရိသည်ယေရှုနှင့်အတူတူ၊ မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်မှု၊ အချိန်မှန်၊ နေရာမှန်၊ မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူယေရှုကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ သူ့ကိုကြည့်ပါ။ နေ့တိုင်းနှင့်နာရီတိုင်းသူ့ကိုမေးပါ၊ “ ယေရှု၊ အခုငါ့ဆီကဘာလိုချင်တာလဲ။ အခုမင်းအချစ်အတွက်ငါဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမလဲ အခုမင်းကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးလဲဆိုတာငါမင်းကိုဘယ်လိုဝေမျှနိုင်မလဲ။ "
သခင်ယေရှုနှင့် ဝိညာဉ်တော်နှင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် သင့်သဘောအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန်၊ သူ၏နေရာ၌ သို့မဟုတ် သူ၏ ထင်ရှားမရှိသည့်နေရာ၌ သင့်အလုပ်မဟုတ်ပေ။ “အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်အလို့ငှါ ယေရှုခရစ်၌ ဖန်ဆင်းတော်မူသော အမှုဖြစ်၏၊၊ ထိုအရာတို့၌ ကျင်လည်ရမည်ဟု ဘုရားသခင်သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတော်မူ၏။” (ဧဖက်၊ 2,10) ခရစ်တော်သည် သင့်အတွက် အသေခံပြီး တဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်သည် သင်တို့အားဖြင့် အသက်ရှင်သော သူကဲ့သို့ အသက်ရှင်၍၊ သင်တို့ကို ယေရှုအားဖြင့် အစဉ်မပြတ် လက်ဆောင်များ ပေးတော်မူမည်အကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုပြင်ဆင်ပေးသော ကောင်းသောအကျင့်ကို လက်ခံပြီး ခရစ်တော်အား ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးသိတတ်ပါသည်။